यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाला भएकी मोडल ! – ramechhapkhabar.com
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाला भएकी मोडल !
हरेक महिला आफू राम्रो भएको देख्न चाहन्छन् । त्यसैले आफू जतिसक्दो राम्रो बन्नको लागि उनीहरु खानपानको साथै फिटनेसमा पनि ध्यान दिन्छन् । त्यस्तै मोडल र अभिनेत्रीहरू कस्मेटिक सर्जरीको सहयोग लिन्छन् । साधारण मानिसले कस्मेटिक सर्जरी गर्न सक्दैन । किनभने यसका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
यूक्रेनकी मोडल अनास्तासिया पोक्रेशचुक विश्वमा आफ्नो गाला सबैभन्दा ठूलो भएको दाबी गर्छिन् । उनले यति ठूलो गाला बनाउन कस्मेटिक सर्जरी गराएर एक नयाँ लुक्स दिएकी छन् । एक रिपोर्टका अनुसार ३२ वर्षकी उनले आफ्नो अनुहारलाई नयाँ लुक्स दिन ६ वर्ष लगाएकी छन् । यसका लागि उनले २१ सय डलर खर्च गरिन् ।